Tsy eto an-toerana fa any ampitan-dranomasina i Billy, izay mpitendry ao amin’ny tarika. Mbola velona ara-dalàna ny tarika ary ny alarobia izao izahay dia efa hilalao etsy Fenoarivo amin’ny tsingerintaonana namana iray. Ho avy ihany koa ny rakikira satria taorian’ny nanavaozan’i Marion an’ilay “Antson’ny manina” dia be dia be no nanontany hoe fa aiza ianareo ? Ho avy ny rakikira. Somary hanavao kely ireo hira teo aloha izahay ary tsy ho ela dia efa ho hitantsika ny mozika “fetifety” hifohazanay amin’ny torimaso sy hanandratana ny mozika Malagasy. Mahafinaritra ny ataon’ny ankizy ankehitriny. Samy manana hira mampihetsiketsika sy mampandihidihy daholo saingy aiza ilay hafatra ? Fanabeazana ny hira fa tadidio ary antony tsy hihazakazahanay manoloana ny rivotry ny fanatontoloana io, hoy hatrany i Gahu.